इन्द्रेणीमा पशुपति शर्मा र रबिना बसेल बीच चल्यो क*डा दोहोरी,कसले जिते? कृष्ण कंडेलनै च*कित भए | Public 24Khabar
Home News इन्द्रेणीमा पशुपति शर्मा र रबिना बसेल बीच चल्यो क*डा दोहोरी,कसले जिते? कृष्ण...
इन्द्रेणीमा पशुपति शर्मा र रबिना बसेल बीच चल्यो क*डा दोहोरी,कसले जिते? कृष्ण कंडेलनै च*कित भए
इन्द्रेणीमा पशुपति शर्मा र रबिना बसेल बीच चल्यो क*डा दोहोरी,कसले जिते?कृष्ण कंडेलनै चकित भए
सामान्य अवस्थामा आफ्नै रोजीरोटी, सफलता र उन्नतिको आपाधापीमा दौडिने मानिस प्रकृतिबाट टाढा भइरहेको थियो। मानवनिर्मित साधन र स्रोतले प्रकृतिको दोहन भइसकेको थियो। प्रकृति प्रदूषित र वातावरणमा असन्तुलनको स्थिति देखिन थालेको थियो। जब कोरोना कहरले मानिस घरभित्र थुनिन बाध्य भए तब प्रकृति खुलेर हाँस्न पायो। जीवजन्तु, कीटपतंग र चराचुरुंगीले स्वतन्त्रताको अनुभूति गरेको महसुस गर्न सकिन्थ्यो।
मानिस घरभित्र थुनिँदा जीवजन्तु फराकिला सडक र चौरमा निस्किएर आफ्नो स्वतन्त्रता महसुस गरिरहेका देखिए। मानिस टाढा हुँदा प्रकृति खुल्न पाउने यो कस्तो दुर्भाग्य ? संसारभरका पत्रकारले प्रकृति रमाएको, यसको सौन्दर्यको तस्बिर र समाचार प्रसारित गरिरहँदा घरभित्र थुनिएका मानिसले जीवन र प्रकृतिको महत्त्व थाहा पायो। स्वच्छता, स्वछन्दता, सुन्दर प्रकृति नै मानिसको आयुस“ग जोडिएको छ भन्ने महसुस हुन थाल्यो। धेरै समयको अन्तरालमा मानिसले यो भिन्नताको महसुस गर्न पायो।
योग एक शारीरिक क्रिया मात्र नभएर सम्पूर्ण स्वास्थ्यको परम विज्ञान र कला पनि हो। योगले हाम्रो पूर्ण स्वास्थ्यको रक्षा गर्छ र जीवनलाई सुखी, शान्त र समृद्ध बनाउन मद्दत गर्छ। मन सधैं अरूमाथि ध्यान लगाउँछ भने ध्यान आफूप्रति ध्यान लगाउने कला हो। अरूलाई ध्यान दिनु प्रेम हो भने स्वयंलाई प्रेम गर्नु ध्यान हो। हाम्रो जीवनमा समस्या छन् भने ती सबको कारण हो ध्यान नहुनु। ध्यानको अभ्यास नगरिनु र ध्यानलाई समय नछुट्ट्याउनु। सन् २०२०
को सकारात्मक उपलब्धि यो रह्यो कि धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिले ध्यान, योग र आफ्नो स्वास्थ्यको महत्त्व जान्न र बुझ्न सके।
Previous articleभाइरल आमा छोरिलाई काठमाडौमा भव्य स्वागत ! Raju Pariyar लाई भेट्न आतुर, सपना पुरा भो भन्दै रोए
Next articleनबराज बिक का आमाबुवाको काठमाडौमा रु*वाबासी ! सडकमा छट*पटाउदै मागे न्या’य, पा’पीहरुले मेरो छोरा मा*रे (सहयोग स्वरुप सेयर गराै)